Ireo zava-nitranga, ireo olon-teraka ary ireo olona maty tamin'ny taona 1916 ny kalandrie Gregôriana.
1916 Amin'ny kalandrie hafa
kalandrie Gregoriana 1916
kalandrie Armenianina 1365
Kalandrie sinoa 4612–4613
Calendario ebreo 5676–5677
Kalandrie persana 1294–1295
kalandrie arabo 1334–1335
kalandrie Ronika 2166
Ny (817) Annika dia anisan'ny zavatra madinidinika ao amin'ny habakabaka. Eo amin'ny fehiben'ny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroan'ny
Ny fahasamihafan'ny soridala-manodidina amin'ny boribory lavorary dia 0.1791685 ; ny afeliany, na ny toeran'ny soridalany akaiky indrindra amin'ny Masoandro, dia 456.106km (3.0536442 AU), ary ny perifeliany, izany hoe ny toeran'ny soridalany lavitra indrindra amin'ny Masoandro, dia 317.106km (2.1256736 AU). Ny halavam-potoana hidodikodonany manodidin'ny masoandro dia 1522.1669366 andro (4.16746594552 taona). Ny anômalia elanelany dia 25.38687.. Ny fironany indray dia 11.33953 degre.
Ireo zavatra nitranga tamin'ity 12 Jona.
Ireo zava-nitranga, ireo olon-teraka ary ireo olona maty tamin'ny taona 1913 ny kalandrie Gregôriana.
Ireo zava-nitranga, ireo olon-teraka ary ireo olona maty tamin'ny taona 1917 ny kalandrie Gregôriana.
Ireo zava-nitranga, ireo olon-teraka ary ireo olona maty tamin'ny taona 1918 ny kalandrie Gregôriana.
Ireo zava-nitranga, ireo olon-teraka ary ireo olona maty tamin'ny taona 1919 ny kalandrie Gregôriana.
Ireo zava-nitranga, ireo olon-teraka ary ireo olona maty tamin'ny taona 1993 ny kalandrie Gregôriana.
Ireo zava-nitranga, ireo olon-teraka ary ireo olona maty tamin'ny taona 1994 ny kalandrie Gregôriana.
Ireo zavatra nitranga tamin'ity 21 Mey.
Adolph Frank dia injeniera mizaka ny zom-pirenen'i Alemaina teraka ny 29 Janoary 1834 ary maty ny 30 Mey 1916
Alfred Ilg dia injeniera mizaka ny zom-pirenen'i Soisa teraka ny 30 Martsa 1854 ary maty ny 7 Janoary 1916
Ernst Mach dia mpahay fizika, filôzôfy mizaka ny zom-pirenen'i Aotrisy teraka ny 18 Febroary 1838 ary maty ny 19 Febroary 1916
Grigori Raspoutine dia mpanao politika teraka ny 21 Janoary 1869 ary maty ny 17 Desambra 1916
Hiram Maxim dia mpamorona mizaka ny zom-pirenen'i Fanjakana Mitambatra, Etazonia teraka ny 5 Febroary 1840 ary maty ny 24 Novambra 1916 tao London
Julius Pohlig dia injeniera mizaka ny zom-pirenen'i Alemaina teraka ny 17 Novambra 1842 ary maty ny 30 Janoary 1916